Maamulka gobolka Banaadir “Alshabaab kuma shiri karaan Muqdisho” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka gobolka Banaadir “Alshabaab kuma shiri karaan Muqdisho”
Mareeg.com: Maamulka gobolka Banaadir ayaa beeniyey in dhawaan uu kulan ku dhexmaray xaafadda Suuqa Xoolaha saraakiil ka tirsan Alshabaab iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka.
Afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Banaadir, Cali Seeko oo la hadlay warbaahinta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar laga sii daayey warbaahinta oo sheegay in madaxa Alshabaab u qaabilsan gobolka Banaadir Cali Maxamed Xuseen uu Suuqa Xoolaha kula kulmay odayaal ka tirsan deegaanka.
Wuxuu sidoo kale, Cali Seeko beeniyey in Cali Maxamed Xuseen uu Muqdisho ka furay tartan Qur’aan akhris, arrinkaas oo dhawaan Alshabaab shaaciyeen, iyadoo lasoo daayey hadal uu jeediyey sarkaalkaas, kaasoo uu ku sheegayo inuu Muqdisho joogo oo uu ka qeybgelayo munaasabad lagu furayo tartan Qur’aan.
“Wararkaan waa been abuur, Alshabaab ma imaan karaan Muqdisho, waa la ogyahay halka ay joogaan oo duurka ayay ku jiraan” ayuu yiri Cali Seeko.
Hadalka Cali Seeko wuxuu jawaab u ahaa nin magaciisa lagu sheegay Cabdi Warsame Guuleed, kaasoo warbaahinta u sheegay iney la kulmeen madaxa Alshabaab u qaabilsan gobolka Banaadir, una gudbiyeen cabasho la xiriirta dhibaato ay ku qabaan askarta dowladda Soomaaliya.
Ninkaan ayaa warbaahinta ka sheegay iney horay cabashadaan ugu gdubiyeen gudoomiyaha degmada Hiliwaa, kadib markii dhibaatada heysata wax laga qaban waayana ay u cawdeen Cali Maxamed Xuseen oo Shabaab u qaabilsan gobolka Banaadir.
Wararka kazoo yeeray Suuqa Xoolaha ayaa dhabar jab weyn ku ah dowladda Soomaaliya oo markasta sheegta iney sugeyso amaanka dalka oo dhana.
Jabuuti oo heegan ku jirta, ciidamo dheeraad ahna u direysa Soomaaliya
Baarlamanka Puntland oo ansixiyey xeerka saxaafadda & wariyaasha oo ka carooday